७१ प्रतिशत किशोर र ५९ प्रतिशत किशोरी कुपोषित
मुलुकका ७१ प्रतिशत किशोर र ५९ प्रतिशत किशोरी कुपोषित रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको सर्वेक्षणले हिमाल र पहाडभन्दा कुपोषणको जोखिम तराईमा बढी रहेको पनि देखाएको छ । परिषदले हिमाल, पहाड र तराईका १३ जिल्लाका किशोर–किशोरीमा
एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपत्यकाबाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइनेछ । बीडीएसको शुल्क देशैभरि १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
जिल्ला अस्पतालमा फोहरको डङ्गुर
सोलुखुम्बु । जिल्ला अस्पताल फाप्लु पछिल्लो समय दुर्गन्धित बन्दै गएको छ । चार दिनदेखि बुबाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा रहेका टाक्सिन्दु सोलुखुम्बुका छप्ते शेर्पा भन्छन् “बुबा त बिरामी हुनुभयो, म पनि यो अस्पतालको फोहरसँगै दुर्गन्धले गर्दा बिरामी हुन लागैँ” ।
छोराको उपचारका लागि तिंलाबाट
निःशुल्क डायलासिस नाममात्रः रकम असुल्छन् अस्पताल
सरकारले गरिबलाई आवश्यकताअनुसार डायलासिस सेवा आजीवन निः शुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि अस्तालहरुले दुईपटकभन्दा बढी डायलसिस गर्दा बिरामीबाट रकम शुल्क असुल्ने गरेका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
नयाँ बिरामीले त चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा डायलासिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले आजदेखि काम नगर्ने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको माग गर्दै अनसमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले शुक्रबार(आज) देखि बहिरंग विभाग (ओपीडी) सेवा बन्द गरका हुन् । रेजिडेन्ट र चिकित्साका
नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विभिन्न समूहका चिकित्सकको अभाव हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू नेपालमा भन्दा विदेशमा अवसर देखेर उतै पलायन हुने गरेका छन् । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा रिक्त
आन्दोलनमा जाने चिकित्सकको चेतावनी
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अस्पतालका नेशनल रेसिडेण्ट डाक्टर्स एशासियसनका अध्यक्ष डा. लिजन महर्जन तथा डा. विष्णु भण्डारीले विज्ञप्ती जारी गरेर डा. गोविन्द केसीको अनसनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल चिकित्सक संघलाई आग्रह
सरकारी अस्पतालका फार्मेसी करोडौं नाफामा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने ताकेता गरिरहेको बेला सरकार मातहत रहेका अस्पतालले भने फार्मेसीबाट करोडौँ कमाउन सफल भएका छन् ।
१५ वर्षअघि स्थापना भएको गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीले एकै वर्षमा आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम
जिका भाइरसको आपतकालिन अवस्था सकियो: डब्लुएचओ
काठमाडौं । जिका भाइरसको संक्रमणले निम्त्याएको आपतकालिन अवस्था अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कम भएको घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले गरेको छ ।
जिका भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि ९ महिनाअघि डब्लुएचओले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालिन अवस्था घोषणा गरेको थियो । जिका भारइसको संक्रमण
यसरी गर्नुस् लामो समय सेक्स
किशोरावस्था तथा युवावस्थामा यौनइच्छा सबैभन्दा तीव्र र बढी हुने भए पनि उनीहरूले गर्ने यौन व्यवहारमा रोकमात्र लगाइन्छ । अहिले युवाहरूको विवाह हुने उमेर बढी हुँदै गए पनि यौनेच्छा मेट्ने बाटोचाहिँ खुला गरिँदैन । हस्तमैथुन पनि त्यसैको चपेटामा परेको छ र यस विषयमा कतिपय गलत धारणा पनि छन् । यौनआनन्द पाउने